एमाले र माओवादीको फेरी एकता ! निर्वाचन आयोगले पठायो यस्तो पत्र – Khabar Patrika Np
एमाले र माओवादीको फेरी एकता ! निर्वाचन आयोगले पठायो यस्तो पत्र
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण २६, २०७७ समय: ०:५४:००
काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादीको एकताको सम्भावना अझै रहेको जनाएको छ । त्यसका लागि १५ दिन भित्र उपस्थित हुन दुवै दललाई भनेको छ । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले विघटन गरिदिए पछि यो विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको हो । सर्वोच्चले दुई पार्टीको एकता भंग गरिदिएको हो । नेकपा ऋषराम कट्टेललाई दिएको छ ।
उनले सो नामको पार्टी दर्ता गरिसकेकाले सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला सुनाएपछि ओली र प्रचण्ड पुर्ववत पार्टीमा फर्किएका हुन् । तर निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत दलको रुपमा रहने हो भने १५ दिनभित्र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय गराएर उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।
‘आयोगले भनेको छ, आयोगको फागुन २३ गतेको निर्णयबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नामक राजनीतिक दल सम्मानित सर्वोच्च अदातलतको फागुन २३ गतेको फैसलाले बदर भएकोले अव यी दुई दलले दल एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ विपरित नहुने गरी दुवै दलले आ–आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरी
सो निर्णयसहित नयाँ दलको रूपमा एकीकरण गर्ने भएमा एकिकरणपछि बन्ने दलको नयाँ नाम र चिन्ह समेत प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र आयोगमा निवेदनसहित उपस्थित हुनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई जानकारी गराउने,’ भनी निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ।